Aqoonyahanno Sheegay In Shirkadda DP World Aysan Saameyn Kulaheyn Siyaasadda Dalka – Goobjoog News
Shirkadda DP World ayaa mashaariic maalgashi ka waday Dekadda Berbera, hase ahaatee mashaariicdaas waxaa ay sababeen muran u dhaxeeya dowladda dhexe iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka.
Haddaba saameyn ceynkee ah ayey ku yeelan kartaa DP Worldn Soomaaliya aqoonyahan Bashiir Cabdulqaadir Macalin oo la hadlay Goobjoog News ayaa ku jawaabay sidaan “Xildhibaannada inkastoo lagu eedeeyo in ay qaataan lacago, balse inta badan Baarlamaannada waxaa ay ku sharfanyihiin waxyaabaha waddanka qarannimadiisa ku saabsan kama aysan gorgortamin”.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa loo gudbiyey in uu fuliyo go’aanka ay baarlamaanka ay ka qaateen shirkadda DP World kana mamnuucay in ay dalka ka shaqeyso.
Haddba muddo intee la eg ayuu madaxweynaha uu ku saxiixi karaa go’aanka ka soo baxay Baarlamaanka marka laga eego dhanka sharciga abuu-kaate Daahir Maxamed Cali ayaa ka jawaabaya waxaa uuna yiri.
“Sharciga gaar ahaan Dastuurka markaad fiiriso ma jiro waqti gaar ah oo madaxweynaha ay waa jib ku tahay in uu ku saxiixo sharcigan baarlamaanka uga imaanaya, madaxweynaha waxaa uu xaq u leeyahay in markii loo soo gudbiyo uu ka baaraandego”.